Soomaaliya, 01 October 2018
Isniin 1 October 2018
Markab dhuxul ka qaaday Soomaaliya oo ku xirtay Ciraq
Safiirka Soomaaliya ee Qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baalle ayaa sheegay in markba dhuxul sharci-darro ah kasoo qaaday Soomaaliya uu ka degay deked ku taalla dalka Ciraaq.
Muhiim ma tahay in xayiraadda hubka laga qaado Soomaaliya?
Dowlada Soomaaliya ayaa ka codsatey kulanka guud ee QM in laga qaado cunaqabateynta xaga hubka ee saran Soomaaliya.
Al-Shabaab oo qabsaday deegaanka Goofgaduud
Wararka ka imaanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Goofgaduud oo qiyaastii 30km dhanka Koonfur ka xiga magaalada Baydhaba ee xarunta gobalka.
Muqdisho: Ciidamo Talyaani ah oo qarax lala beegsaday
Ururka Al-Shabab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax ismiidaamin ah oo la beegsaday baabuur milatari oo ay leeyihiin ciidamada Talyaaniga, oo qayb ka ah kuwa Midowga Yurub ee Soomaaliya u jooga tababarka ciidamada Soomaaliya iyo talo-siinta kuwa AMISOM.
Khudbaddii Somalia ee Q. Midoobay
Wasiirka Arimaha Dibedda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo shalay khudbadda Soomaaliya ka jeedinayey kulanka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in cunaqabataynta oo la qaado ay Soomaaliya awood u siinayso inay mas’uuliyadda dhinaca amniga kala wareegto AMISOM.
Wariye Lagu Xiray Dhuusamareeb
Mid ka mid ah suxufiyiinta u shaqeeya saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliya aya amaanta lagu xukumay lix bilood oo xarig ah magaalada Dhuusamareeb ee badhtamaha Soomaaliya. Dhinaca kalena mid ka mid ah suxfiyiinta ku sugan Muqdishu ayaa isna sheegay inay soo gaadheen hanjabaado.
Waraysi: Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya
Wasiirka arrimaha Dibedda Somalia Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in uu ka codsaday Maraykanku inuu xayiraadda dhinaca socdaalka ka qaado Soomaalida Maraykanka imanaysa, isla markaana uu aqoonsado baasaboorka Soomaaliya.
Balcad: Dad Loo Tababaray Xallinta Khilaafaadka
Tababar lagu baranayo sida loo xalliyo qilaafyada gacan ka hadalka iyo sida dib u heshiisiin loogu sameeyo dadyoowga ay colaaduhu u dhaxeeyaan ayaa loo qabtay qeybo ka mid ah bulshada Balcad ee gobalka Shabeellaha Dhexe.
Dhageyso Barn. Dhacdooyinka Toddobaadka
Ku soo dhawaada barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka, oo uu inoo soo jeedinaayo Jamaal Axmed Cismaan. Waxaan si gaar ahaaneed barnaamijka diiradda ugu saari doonnaa deeqaha tooska ah ee Bankiga Adduunka iyo Midoga Yurub ay toddbaadkan sheegeen inay siin doonaan Soomaaliya.
Dhageyso Barnaamijka Caweyska Washington, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Cabdixakim Maxamuud Shirwac.
Dhegayso Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha
UK oo ku baaqday in la taageero Amisom
Dowladda Britian ayaa ugu baaqday deeq bixiyeyaasha caalamiga ah inay kordhiyaan taageerada ay ku bixiyaan Howlgalka Midowga Africa ee Soomaaliya ee AMISOM, si looga caawiyo Soomaaliya gaarista xasilooni baahsan.